Wasiirka ciyaaraha ee dalka oo iska fogeeyay fedeexdaha Olimpikada Rio – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirka ciyaaraha ee dalka oo iska fogeeyay fedeexdaha Olimpikada Rio
Wasiirka wasaarada ciyaaraha iyo dhaqanka ee dalkan Kenya Hassan Wario ayaa shalay sheegay in uunan lahayn masuuliyada dhibaatada orodyahaanada u dhashay Kenya ay kula kulmeen caasimada Rio ee wadanka Brazil.
Sido kale wasiirka oo shalay dib ugu soo laabtay wadanka ayaa wargeyska the Sunday Nation u sheegay in gudiga qaran ee ciyaaraha olimpikada ay leeyihiin masuuliyada la xiriirta maamul xumada kooxdan.
Wasiirka oo arrintan ka hadlayay ayaa yiri waxaan gaaray goobo badan oo ay ku tartamayeen orodyahaanada kenyaanka ah balse sarakiisha gudiga olimpikada ayaa ahaa kuwo goobta ka fog oo lagu wareejinayo babuurta loo yaqaano limousines
Dr Wario ayaa sheegay in tartamada olimpikada ee sanadkan ay noqon doonaan mid si weyn taarikhda dalka loogu xuso guusho Kenya uga soo hooyatay.
Waxyaabaha muranka dhaliyay waxaa ka mid ah liiska orodyahaanada iyo tirada wufuuda ee Brazil tagay.
Orodyahaano u dhashay Kenya oo gaaraya 52 ayaa Rio la geeyay in kasta oo wasiirku uunan shaacinin tirada rasmiga ee wafuuda ciyaaryahanadan wehlinaayay.
← Xisbiga Wiper oo u dabaal dagayo abaalmarinta caalamiga ah ee la siiyay Kalonzo Musyoka
Dowlada Itoobiya oo baaritaana ku sameyneyso dilalka dibadbaxayaasha →